I-Recipe ye-Quesada ngenkukhu
Silungiselela i-quesadilla ngenkukhu iQuesadia, i-quesadilla (ukusuka kwi-quesadilla, oko kukuthi, i-tortilla ye-cheese)-ngoku isitya esidumile sehlabathi saseMexico. Igama lesiRashiya linokuvakala kokubili kokuqala kunye nokwesibini ukuhluka, kuxhomekeke kuloluphi ulwimi iresiphi eguqulelwe ukusuka - iSpanish okanye iSpeyin eMexico. Ekuqaleni, queadia yayisidlo esilula kakhulu, esineentakeki ezimbini, ezitywathwa ngetekisi kwaye zityongwe kwi-charcoal okanye epanini yefrying. Ngokuhamba kwexesha, iintlobo zeenkukhu kunye nenyama, imifuno kunye nama-mushroom zaqala ukufakwa kwi-quad. Inguqu yeklasi ye-quesid ayikho, ngaphandle kweeshizi, ngaphandle koko konke kuxhomekeke kwingcamango yompheki. Njengekhetho, yenza kesadiyu kungekhona kwiiveki ezimbini, kodwa ukusuka kwelinye, uxoxwe ngokuzaliswa kwesiqingatha. Ukuzaliswa kunokutshisa ngomlilo kwiindawo zaseMexico ezinokukhetha okanye ezingabonakaliyo. Kumbuzo we-quesadilla, unqunyulwe kwikota, i-salsa okanye i-sauce enomuncu i-souric isetyenziswa rhoqo.
I-Condiment Mexican 3 g
I-Parsley entsha 10 g
I-cheese nzima 400 g
Utamatisi 2 ii-pcs.
Ioli ye-sunflower ecocekileyo yelanga le-100 ml
Tortilla 6 iipcs.
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-quesadia siza kufuna izi zithako ezilandelayo: tortilla tortilla, inkukhu, utamatisi, i-pepper e-sweet, u-anyanisi, i-garlic, ushizi, i-oyileji, i-oyile, umxube we-condiments (i-cumin, i-paprika, i-onions eyomileyo ne-garlic, i-oregano, i-cayenne pepper, i-chili , umnyama omnyama), ityuwa, izityalo.
Isinyathelo 2 Sika i-anyanisi zibe ngamabhubhu amancinci.
Inyathelo 3 Fry i-anyanisi ngokudibanisa ioli yelanga.
Isinyathelo 4 Sika intaka yenkukhu kwifillet, uthathe amacwecwe amancinci.
Inyathelo lesi-5 Yongeza inkukhu kwi-anyanisi eyosiweyo, ngexesha lexesha laseMexican kunye netyuwa, i-fry. Musa ukuyiqhayisa ngeenongo, ukuba awufuni ukukhawuleza.
Inyathelo 6 Hlaba iipilisi ezinomsola zibe zikwindawo ezincinane.
Inyathelo lesi-7 Yongeza i-pepper kunye ne-garlic ecoliweyo enkukhu, qhubekani nidla kunye.
Isinyathelo 8 Sika i-tomato-cross-cross, scald ngamanzi abilayo kunye ne-peel, uze uthathe iziqhezu ezincinci.
Inyathelo 9 Hlanganisa iitamatato kunye ne-parsley edibeneyo kunye nemifuno ye-dill, udibanise kunye nenkukhu kunye nezinye izityalo kuze kube lula.
Inyathelo 10 Siyityulela ushizi kwi-grater enkulu.
Inyathelo 11 Thatha i-tortilla, ufefe ngeeshizi.
Isinyathelo 12 Beka ukugxotha kwintshi kwieshizi.
Inyathelo 13 Hlaza phezulu kwakhona ngeeshizi uze udibanise i-tortilla yesibini, cindezela ngokukhawuleza iimbini zombini.
Inyathelo 14 Fryta i-chestnut kwioli ye-sunflower (okanye umnquma) kude kube lula ukukhanyisa kumabini omabini.
Inyathelo 15 Beka ikhekhe kwisitya esikhulu, uthathe iziqhekeza ezine, usebenze nge salsa.
I-pizza kunye netyhuna kunye ne-anyanisi
Isaladi kunye netamatisi omisiwe kunye ne-avocado
Umqulu we-lavash kunye nenyama egayiweyo
I-pizza nebhozi yehozi yehozi kunye ne-arugula
Indlela yokwenza iipayi ngeapulo ekhaya. Iimfihlelo zeepeyi kunye ne-apula
I-Aromatherapy yindlela yamachiza ebalulekileyo
Ukwaneliseka okanye ubugcisa be-female orgasm
Inkcazo yesifuba: ukuqokelela izicathulo zobuKristu uLouboutin The Remix 2017
Uthandane ubudlelwane: gcina umgama okanye uchithe kwiqabane
Ukubunjwa kunye neepropati zerharnate
Izitya zemifuno kwitheyibhi yokutya: izitya ezivela kwimifuno yoNyaka omtsha 2015
Kutheni abantwana beselula belele ngokulala?